फिरन्ते जाती राउटे समुदायलाई सरकारले नागरिकता दिने - Paschimnepal.com
फिरन्ते जाती राउटे समुदायलाई सरकारले नागरिकता दिने
सुर्खेत । जंगलमा फिरन्ते जीवन विताउँदै आएका राउटे समुदायलाई सरकारले नागरिकता दिने भएको छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गुराँस गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्ष वितरण गरेको परिचयपत्रका आधारमा नागरिकता दिने निर्णय गरेको हो।
सोमबार सरोकारवालाहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा. मानबहादुर विकेले दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले वितरण गरेको परिचयपत्रका आधारमा नागरिकता दिइने बताए।
गुराँस गाउँपालिका–८ को गर्चाखोला स्थायी ठेगाना राखेर गाउँपालिकाले परिचयपत्र वितरण गरेको थियो। राउटे समुदाय अहिले गुराँस गाउँपालिका–५ को कान्छीबजारमा बसेका छन्। राउटे समुदायसँग काम गर्दै आएको सामाजिक सेवा केन्द्र ९सोसेक० का अनुसार राउटे समुदायको जनसंख्या १४६ छ। ती मध्ये ६० वर्षमाथिका २५ जना छन् भने ६४ जना बालबालिका छन्।
प्रकाशित मितिः सोमवार, असार २, २०७६ 7:32:01 PM
Prevपत्रकार डी.सी. लाई मातृशोक
Nextकरोडौंको खानेपानी अवरुद्ध